माता पाथिभाराले सबैको रक्षा गरुन, फाल्गुन ३० बुधबार मार्च १४ को राशिफल – Todays Nepal
माता पाथिभाराले सबैको रक्षा गरुन, फाल्गुन ३० बुधबार मार्च १४ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल फाल्गुन ३० गते बुधबार इश्वी सन २०१८ मार्च १४ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथी चन्द्रमा मकर राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु प्रदोषव्रत द्यौपाटनमा देशोद्वारपूजा फाल्गन मसान्त – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
पारीवारिक साथ सहयोगले अधूराकार्य हरु सम्पादित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । अध्यन अध्यनपनमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेकोछ ।
जिम्बेबार ब्यत्तिहरुको कार्य त्रुटीको अपजस तपाईले भोग्नु पर्नाले सामान्य झन्झट आईपर्नेछ । यात्रा कष्टकर हुन सक्नेछ । आम्दानिका तुलनामा खर्च अधिक हुने सम्भाबना रहेकोछ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु उत्तम रहनेछ ।
सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ता उत्पन्न हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ ।
मानसीक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । अन्य ब्यक्तिको पूर्ण बिश्वास नगर्नु होला ।
बोलिका कारण दाम्पत्य शुखमा केहि खटपट रहनसक्छ । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला ।
आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ ।
शत्रु सबल रहलान । आम्दानि क्षेत्र मध्यम रहनेछ । आफन्तजनको साथ सहयोगमा कमि आउनाले सामान्य मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । पारीबारिक मनोरञ्जनका निम्ती धेरै समय र पैसा खर्चनु पर्नेछ ।
पारीवारिक मेल मीलाप बढ्नेछ । आफ्नै घमन्डका कारण दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । प्रिय खबर द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । यात्रा मनोरन्जन पुर्ण रहनाले मन प्रशन्न रहला । दाजु भाई तथा मित्र जनहरु सँगको सम्बन्ध टाढिन सक्छ । परीवारका कोहि सदस्यहरुको स्वास्थमा खराबी आउन सक्नेछ ।
सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । शत्रु सबल रहनाले कुराकाट्ने ब्यक्तिहरुको बृद्धि हुनेछ । मनोबिलासिताका सामानहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ ।
तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन् । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेता पनि सामान्य खर्च हुन सक्छ ।
ज्योतिष शास्त्र भन्छ – हात गोडमा रौ हुने महिलाहरु सँग विवाह नगर्दा राम्रो